Iindaba-Umbhiyozo ofanelekileyo weKrisimesi kunye nabasebenzi bethu kunye nabathengi
Umbhiyozo ofanelekileyo weKrisimesi kunye nabasebenzi bethu kunye nabathengi
Umbhiyozo woMnyhadala weKrisimesi wowama-2020 yayilixesha elimnandi nelingaqhelekanga elizaliswe yimincili emangalisayo kunye namandla kubo bonke abasebenzi benkampani yethu.
I-Christmas Fiesta, ebhiyozelwa kwihlabathi jikelele, idla ngokuba lixesha lokubonisa isenzo sesisa, uthando nobubele kwabo sibathandayo, izihlobo, oogxa bethu kunye nabamelwane, kunye nexesha elibekelwe bucala lokuhlanganisana kosapho. .
Thina ke eSuzhou Springchem International Co., Ltd., uchulumanco kunye nokubhiyozelwa kweKrisimesi kwabonakaliswa ngabo bonke abasebenzi bethu kunye nabathengi ngokufanayo.
Kwaye njengomnye wabavelisi abaphambili bemichiza yemichiza yemihla ngemihla kunye nezinye iikhemikhali ezintle;sibulela kubasebenzi bethu abangapheziyo nabasebenza nzima, inkampani inikezele ngesenzo sesisa kubasebenzi bayo ngeepasile zentlalontle kunye namabhaso.
Ukuqinisekisa ukuba abasebenzi bethu bayawubhiyozela kwaye bayawonwabela umnyhadala weKrisimesi kunye nabo babathandayo kwisitayile esihle, inkampani isasaze izinto zezipho ezipakishwe kakuhle ngomsebenzi ngamnye enkampanini.
Ngaphezulu kwezipho ezipakishiweyo ezinikwa wonke umsebenzi kwinkampani yethu, siye saququzelela ukuphela konyaka kumnandi apho siye sakhupha amabhaso kunye nenkuthazo kwiindidi ezahlukeneyo zabasebenzi kwinkampani, ngokusekelwe kwizinga labo lomsebenzi.
Kanye njengokuba iluqheliselo lwethu njengomvelisi othathelwa ingqalelo kakhuluikloroxylenolkunye neminye imichiza emihle, imisebenzi yentlalo-ntle yequmrhu kubo bonke abasebenzi enkampanini yayiyindlela yokudlulisela ulonwabo lwenkampani kunye nolonwabo ngokubhekiselele kukuzinikela kunye nokukhuthala kwabasebenzi kwiminyaka edlulileyo.
Ukongeza, esi senzo sobubele, ukwabelana, kunye nothando, yinkampani yenzelwe ukukhuthaza bonke abasebenzi benkampani ukuba banyuse inkuthalo yabo kunye nemveliso kwabanye ukugcina iwonga lenkampani njengomnye wabavelisi baphambili bemichiza yokungunda.
Iimpendulo zomqeshwa malunga nesisa kunye nesenzo sobubele sabaphathi benkampani yayiyimbonakaliso epheleleyo yochulumanco kumboniso kunye nomzekelo wothando esibabonise wona, nto leyo bonke bayonwabele.
Ngaphaya koko, iintloko zesebe ngalinye kulo mbutho zafunga ukuba ziza kunika konke okusemandleni abo kunye neqela labo ekuphakamiseni umgangatho wenkampani eyenye yezona ziphambili zokubulala ukungunda kunye nabavelisi bemichiza elungileyo.
Ngokunjalo, abasebenzi baqinisekise inkampani ukuba baya kuqhubeka nomsebenzi wabo onzima ukuqinisekisa ukuba igama lenkampani kumazwe ngamazwe njengomnye wabavelisi bemichiza bokubulala ukungunda kunye neekhemikhali ezilungileyo liyagcinwa ngokuzibophelela kuxanduva lwabo lomsebenzi.
Umbhiyozo weKrisimesi kwinkampani yethu ube yimpumelelo njengoko wonke umntu wayonwabile njengoko babebuyela ekhaya bephethe izipho ezininzi zentlalontle yokubhiyozela iKrisimesi.
Hlanganyela nathi ngezona khemikhali zokubulala ukungunda
Njengomnye wabavelisi abahamba phambili bemichiza yokungunda kunye nezinye iikhemikhali ezintle ezifanaikloroxylenol, unokuba nentembelo kuthi kuzo zonke iimfuno zakho zeekhemikhali.
UngaQhagamshelana nathinamhlanje ngayo nayiphi na iprimiyamu yethu yomgangatho weprimiyamu yokubulala umngundo, kwaye uya kuvuya ngakumbi ukuba utyale imali kwezona mveliso zintle.
Ixesha lokuposa: Jun-10-2021